ကြည့်မိလိုက်လို့တော်သေးတာပေါ့... အားလုံးသတိထားစရာပါ - Tameelay
ဒီနေ့ညနေ အိမ်နားက ဝေဇယန္တာလမ်းမပေါ်က Four Seasons Hot Pot မှာ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် ညစာအဖြစ်သွားစားကြတာ
ငွေရှင်းတော့ Visa Credit Card နှင့် ထုတ်ရှင်းတော့ တကယ်ကျသင့်ငွေ MMK 30705 ကျသင့်တာကို
ဆိုင်ဝန်ထမ်းတယောက်က MMK 3070512 credit card က နှုတ်ယူလိုက်ပြီး အနီးကြည့်မျက်မှန်မပါတော့ အတူသွားစားတဲ့
သူငယ်ချင်းက ကြည့်လိုက်တော့မှ သိန်းသုံးဆယ်ကျော်ဖြတ်ထားတာပြန်ပြောတော့
ဟိုပြောဒီပြောနှင့် အချိန်တနာရီနှင့်သုံးဆယ်မိနစ်လောက် (၁:၃၀) ကြာတော့မှ ပိုတဲ့ငွေကို ငွေသားနှင့်ပြန်အမ်းပေးတယ်။
တော်တော်ကို သတိထားရမယ့်ဆိုင်ပဲ။ အင်မတန်မှ ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီ တဲ့ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်
အားလုံး သိပြီး သတိထားရအောင် ဒီ Post ကို Public ဖွင့်ပြီးတင်ပါတယ်။
ဘောက်ချာစာရွက်နှင့် Credit Bill ၊ ပြန်အမ်းငွေများကို ပုံနှင့်တကွ သက်သေအဖြစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit : Yan Kin
ဒီနညေ့နေ အိမျနားက ဝဇေယန်တာလမျးမပျေါက Four Seasons Hot Pot မှာ သူငယျခငျြး ၂ ယောကျ ညစာအဖွဈသှားစားကွတာ
ငှရှေငျးတော့ Visa Credit Card နှငျ့ ထုတျရှငျးတော့ တကယျကသြငျ့ငှေ MMK 30705 ကသြငျ့တာကို
ဆိုငျဝနျထမျးတယောကျက MMK 3070512 credit card က နှုတျယူလိုကျပွီး အနီးကွညျ့မကျြမှနျမပါတော့ အတူသှားစားတဲ့
သူငယျခငျြးက ကွညျ့လိုကျတော့မှ သိနျးသုံးဆယျကြျောဖွတျထားတာပွနျပွောတော့
ဟိုပွောဒီပွောနှငျ့ အခြိနျတနာရီနှငျ့သုံးဆယျမိနဈလောကျ (၁:၃၀) ကွာတော့မှ ပိုတဲ့ငှကေို ငှသေားနှငျ့ပွနျအမျးပေးတယျ။
တျောတျောကို သတိထားရမယျ့ဆိုငျပဲ။ အငျမတနျမှ ကငျြ့ဝတျနှငျ့မညီ တဲ့ဆိုငျဖွဈတဲ့အတှကျ
အားလုံး သိပွီး သတိထားရအောငျ ဒီ Post ကို Public ဖှငျ့ပွီးတငျပါတယျ။
ဘောကျခြာစာရှကျနှငျ့ Credit Bill ၊ ပွနျအမျးငှမြေားကို ပုံနှငျ့တကှ သကျသအေဖွဈတငျပေးလိုကျပါတယျ။
ကျွန်မရဲ့ပါးက သနပ်ခါးက KTV ကမိန်းမတွေရဲ့ မိတ်ကပ်နံ့လောက် မောင် မမွှေးတော့ဖူးထင်ရင်
KTVက ကောင်မလေးတွေ သီချင်းဆိုသံက ကျွန်မမောင့်ရင်သွေးလေးကို ချော့သိပ်တဲ့သားချော့တေးအသံထက်နားထောင်လို့ကောင်းနေပြီဆိုရင် ရုံးကအတွင်းရေးမှူးမလေးဖျော်တိုက်တဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်က ကျွန်မနေ့စဉ်ပြင်ပေးတဲ့ထမင်းဝိုင်းထက်ပိုစားကောင်းသောက်ကောင်းမယ်ထင်ရင် အိမ်ထောင်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးတာဝန်ကို အချိန်ပြည့်ယူနေရတဲ့ ကျွန်မရဲ့ပါးကသနပ်ခါးက ကျော့ကျော့လေးနေရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကမိန်းမတွေရဲ့ မိတ်ကပ်နံ့လောက်မမွှေးတော့ဖူးထင်ရင် ရင်သွေးလေးတွေနဲ့သံယောဇဉ်ကြိုးတွေရစ်ပတ်ချည်နှောင်ထားတဲ့မိသားစုသံယောဇဉ်ကြိုးလေး ကျွန်မရဲ့မောင်လို့ခေါ်သံ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ဖေဖေခေါ်သံက မောင့်ကောင်မလေးရဲ့ဦးလို့ခေါ်သံလောက်မှမဆွဲဆောင်နိုင်တော့ဘူးထင်ရင် ထားခဲ့ပါမောင် ပျော်သလိုထွက်သွားလိုက်ပါ ဒါပေမယ့် မောင်ပြန်လာတဲ့တနေ့ကျရင်တော့မိသားစုကအရင်လိုပြန်မဖြစ်နိုင်တေ့ာ့ဖူး ၁၀နှစ် ၁၀ မိုး …
မိန်းက​လေးတိုင်းဖတ်​ဖို့ ယောက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့ မိန်​က​လေးတစ်​​ယောက်​ ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး အဲ့ဒီ ယောက်ျားကို ချစ်နေသေးတဲ့ စိတ်ကြောင့်သာ ဘဝ ပျက်စီးသွားမှာပါ. မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ အယုံကြည်​လွယ်​တယ်​. ခံစားရလွယ်​တယ်​ အားနာလွယ်​တယ်​.. အစွဲလမ်းကြီးတတ်​တယ်​ဆိုရင်​ ​နောင်​တ​တွေနဲ့ အလိမ်​အညာ​တွေပဲ ခဏခဏ ​ခံနေရမှာ​ပေါ့. ​ဖောက်​ပြန်​တတ်​တဲ့ ​ယောက်ျားတစ်​​ယောက်​ကို ဘယ်​​တော့မှ ခွင့်​လွှတ်​ပြီး ​ရှေ့ဆက်​လက်​မတွဲပါနဲ့. …